कति यौनसम्पर्क राख्नु ठीक ? - Younka Kura
यौनेच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणालीहरू सक्रिय हुन्छन । एक त इन्डोक्राइन सिस्टम अन्तर्गतका रागरसहरूले यौनेच्छाको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्द्रिय प्रणालीका साथमा स्नायुप्रणालीले । यौनेच्छा जाग्ने (विकसित हुने) वा त्यसको व्यग्रतामा रागरस अर्थात् हार्मोनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यौन क्रियाकलापमा भन्दा टेस्टेस्टेरोनले यौनेच्छा वा यौन व्यग्रतालाई बढी प्रभाव पर्छ । महिलामा पनि टेस्टेस्टेरोनले नै यौनेच्छा वा यौन व्यग्रताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
यसमा स्वाभाविक रूपमै इन्द्रियहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हाम्रा इन्द्रियहरू दृष्टि, स्पर्श, ध्वनि, गन्ध र स्वादसँग यौन सम्पर्क वा यौनेच्छासँग सम्बन्धित छन् भन्ने हामीलाई थाहै छ । यौनसम्पर्कलाई ‘शारीरिक सम्बन्ध’ भनिए पनि यसको मानसिक पाटो एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । यौन उत्तेजनाको स्रोत जे–सुकै भए पनि अन्तिम रूपमा त्यसलाई अर्थ लगाउने र बुझ्ने कुरा मस्तिष्कले नै गरिरहेको हुन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यौन उत्तेजनालाई ‘स्नायु प्रणाली तथा यौनअङ्ग संलग्न एक जटिल प्रक्रियाको क्रियाशीलता हो’ भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । यौनसम्बन्धी हाम्रा भावनाहरू मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छन् । यौनेच्छा भए पनि अन्य कारण जस्तै कि शारीरिक (यौनसम्पर्क राख्दा पीडा हुने, कुनै रोगव्याधि लागेको वा थकान) वा मानसिक (चिन्ता, तनाव, भय) का कारणले त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छन् । अर्कातिर श्रीमतीको संगको सम्बन्ध तनावपूर्ण भएको स्थितिमा पनि यौन चाहनामा नकारात्मक असर पर्छ । यस्ता कारण भए, कारण अनुसार त्यसको समाधान खोजे यौन जीवन सुखमय रहन्छ ।
कति यौनसम्पर्क राख्नु ठीक ? यौन स्वास्थ्यका सन्दर्भमा यो एक चिकित्सकलाई प्रायः सोधिने प्रश्न हो । यो व्यक्ति र स्थितिअनुसार फरक हुन्छ । हामीलाई प्यास लागेअनुसार पानी पिउँछौं । धेरै लागे धेरै पटक र त्यति प्यास नलागे थोरै । यौनेच्छा शान्त पार्न आफ्नो आवश्यकताअनुसार धेरै वा थोरै यौनसम्पर्क राख्न सकिन्छ ।
सामान्य दम्पतीले सातामा यस्तै २ दशमलव ५ पटक यौनसम्पर्क राख्छन् । विवाहको तुरुन्तै पछिका जोडीले अलि धेरै यौनसम्पर्क राख्छन् । नयाँ यौन साथी वा विवाह गरेर सँगै बस्न थालेका जोडीले भने दिनहुँ मात्र होइन, एकै दिनमा कैयौं पटक यौनसम्पर्क राख्छन् । तपाईंले विवाह गर्नु भएको कति भयो, खुलाउनुभएको छैन । सामान्यतस् विवाह गरेको पहिलो वा दोस्रो वर्षसम्म एक दिन (२४ घण्टा) मा एकपल्ट यौनसम्पर्क राखिन्छ । त्यसपछि भने यो क्रम हप्तामा २ देखि ३ पटकमा झर्छ अनि वयस्क जीवनको लामो समयसम्म कायम रहन्छ । विस्तारै प्रौढ अवस्थामा पुगेपछि भने त्यसमा कमी आउँछ ।